အိမ်မက်စေရာ: October 2012
မြန်မာ ပြည်က လာတယ်ရှင့်..
အိမ်မက်တစ်ယောက်လဲ စိတ်ထဲ ရှိတိုင်း ဘလော့ဒ်ထဲ လာလာ အော်နေရတာ လာဖတ်တဲ့ သူတွေကို တစ်ခါတစ်လေ တော့လဲ အားနာတယ်..
ဒါပေမယ့်လဲ မအော်ရရင် ရင်ထဲ ပိုနေရခက်လွန်းလို့..
အသိမိတ်ဆွေ အသစ်ပဲ တိုးတိုး..
ကြုံလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ..
လမ်းသွားရင်း လာရင်းပဲ တွေ့တွေ့...
ဘယ်က နိုင်ငံကလာလဲ တဲ့????
အိမ်မက် အမြဲ ပြန်ဖြေတယ် ...မြန်မာပြည်က လာတယ်လို့..
အများသိတာ Burma ဆိုတော့ Burma က လာတယ်ပေါ့..
ဒီတော့ အဲ့ဒါ ဘယ်မှာလဲ တဲ့..
ဒါနဲ့ Burma က အခု Myanmar လို့ခေါ်တယ် ပြောတော့ ..
ဒါနဲ့ သူတို့ ဂျာမန်တွေ စတန့်ထွင်ထားတဲ့ နာမည်ကို ပြောလိုက်တယ်.
တစ်ချို့လဲသိတယ် တစ်ချို့လဲ မသိဘူး....း(
မြန်မာဆိုတာကို မြန်မာလို့ ပဲ ပြောချင်တယ် ..ဖြစ်နိုင်ရင် တခြားနာမည်တွေ မပြောချင်တာတော့ အမှန်..ကိုယ့်နိုင်ငံကို နာမည် အရင်းနဲ့ ပဲ သူတို့ကို သိစေချင်တယ်..
သူတို့က တည်နေရာကို မသိတာနဲ့ပဲ ထုံးစံအတိုင်း Thailand နားမှာ ဆိုတော့ ...
အဲ့လို အမေးခံရရင် တအားကို ဒေါသထွက်တာ..
စကားတူလား အစားတူလား နီးလား..ဘာလားနဲ့..
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ဆင်တယ် ဆိုပေမယ့် သေချာကြည့်ရင် မတူသလို ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေလဲ ကွဲပြားနေတာ အများကြီးပါ..
ပြီးတော့ လမ်းမှာ ကြုံဖူးတာ..
ထိုင်းကလာတာလား ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလား ဆိုတာမျိုး...
အိမ်မက် ဘယ်သူ့ကိုမှ စော်ကားတဲ့စကားမျိုး မပြောချင်ပါဘူး...ဒါပေမယ့် မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကို ထိုင်းထင်ပြီး လာလာ ညှိနေကြတာတွေကို ခံရခက်လွန်းလို့ပါ..
အိမ်မက်မှာလဲ ထိုင်းမိန်းကလေးမိတ်ဆွေ တွေရှိတယ် ..သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် တစ်ခါတစ်လေ ထိုင်းပါလို့ မပြောကြဘူး...ဟင်းးး
အဲ့ဒါနင်တို့ နိုင်ငံမှာရော ရှိလားတဲ့..တကယ်တမ်းပြောကြေးဆို သူတို့က ယဉ်ကျေးမှုဆိုပေမယ့် ခုမှ ပိုပြီး ပေါ်ပြူလာ လုပ်နေကြတာပါ..
အိမ်မက်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ဆိုတာ ရှိလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းပဲ မရေတွက်နိုင်တော့ဘူး..ဒါကို သူတို့ကပဲ သူတို့စီက ကော်ပီလိုလို လာထင်ချင်သေး..စိတ်နာတယ် အဟုတ်
ခုချိန်မှာ ထိုင်း ထိုင်း ဆိုတာက ဥရောပတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင် အောင် သိနေကြတော့..
မြန်မာ ဆိုတာကို ထိုင်းနဲ့ ရောထွေးပစ်ချင်ကြတာ..
မြန်မာဆိုတာက သူတို့ရဲ့ ကလုန်းလိုလို ထင်ချင်ကြတာ..
တကယ်တော့ မြန်မာ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းနဲ့နေလာတာ.
အဲ့ဒါပဲ ခုတော့ အိမ်မက်ဘယ်တော့မှ ထိုင်းနားကလာတယ်လို့ မဖြေတော့ဘူး..အရင်ကတော့ သူတို့ သိသာမယ့် နေရာမျိုးနဲ့ ပြောရင် ပိုသိမယ်ထင်တာ..ဒါမျိုး ဖြစ်ဖြစ်နေတော့..
ခုမေးလာတိုင်း နဲနဲ အချိန်ယူပြီး ပြောတယ်..ငါတို့ နိုင်ငံက မြန်မာ..
ငါက မြန်မာပြည်က လာတာ.
မြန်မာပြည်ဆိုတာ China , India နဲ့ Thailand ကြားလောက်မှာ ရှိတာ..လို့
အဲ့ဒါမှ မသိသေးဘူး ဆိုရင် ထပ်မေးလိုက်တယ်..
ကမ္ဘာ့မြေပုံရော နင်တို့ မြင်ဖူးကြလားလို့.. မှတ်ကရော
ဒီလောက် အ ပြီး ဗဟုသုတ မရှိတဲ့သူတွေ...
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော်.. ဘာပဲပြောပြော အိမ်မက်တို့က ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတော်တော်များများကို ကျောင်းမှာ ကထဲက သင်ထားရတာ မသိတဲ့ နိုင်ငံမရှိသလောက်ပဲ..
သူတို့ကျတော့ ဥရောပ သာဆိုကြတယ် ကမ္ဘာ့မြေပုံတောင် စေ့စ့ စပ်စပ် မကြည့်ခဲ့ရဘူးထင်တယ်..
အဲ့ဒါကြောင့် အိမ်မက် သူတို့ကို ပြောတာ..
အိမ်မက်တို့ နိုင်ငံ ပညာရေးက သူတို့ထက်သာတယ် လို့...
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 6:02 PM5comments:
မပြီးဆုံး နိုင်သေးသော ပြောင်းလဲမှုများနှင့်
လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်လောက်ကထဲ က စိတ်ဓါတ်ကျပါတယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်တွေ တောက်လျှောက်ရေးရင်း နဲ့ ပဲ..
ကိုယ့်ကို ကိုယ် တစ်ခုခု ပြောင်းလဲမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ ခံစားမိလာတာ..
အဲ့ဒီ နောက်ပိုင်းတော့ တစ်ခုချင်းစီ ပြောင်းလဲ လာတယ်..
ပြောင်းလဲ တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကောင်းတဲ့ အရာတွေ ရှိသလို မကောင်းတဲ့ အရာတွေလဲ တွဲပါနေတာပဲ..
ခံစားချက်အနေနဲ့ကတော့ လူက လေပေါ်ရောက်နေသလို..
တစ်ခါတစ်လေ ဦးတည်ရာက ဘယ်ကိုမှန်းမသိ..
ငိုရင်း ရယ်ရင်း အားတင်းရင်းနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်အောင် လုပ်ရတာ ပင်ပန်းလိုက်တာ လွန်ရော..
ကိုယ့်အတွက် နေရာ မရှိတဲ့ အချိန်တွေ ကြုံဖူးလား..
သိပ်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းသလို ကြောက်စရာလဲ ကောင်းတယ်..
ငါဆက်မှ အသက်ရှင် နိုင်ပါတော့မလားလို့လဲ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားမိတယ်..
နေနေကျ နေရာမှာနေလဲ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ အထင်သေးစော်ကားမှု အနိုင်ကျင့်မှုကို ခံရတယ်..
အပြင်ထွက်သွားလဲ လူပေါင်းများစွာရဲ့ အထင်သေး ရှုပ်ချချင်နေတဲ့ အခြေအနေ ကြုံရတယ်..
အလုပ်ရောက်ပြန်ရင် စူးစမ်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ တီးတိုးစကားသံတွေ ကြားရတယ်..
အဲ့ဒီ အချိန်တွေ ကျော်ဖြတ်ပစ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတောင် ထင်ခဲ့ရတယ်..
ကြိုးစားရင်း ဘာမဆိုရနိုင်တယ်လို့ အတိအကျ အာမမခံပေမယ့် ကိုယ်မခံစားနိုင်တော့တဲ့ အရာတွေ ကြုံလာပြီဆို လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ.. ကြိုးစားမှုတစ်ခုရဲ့ နောက်မှာ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခု ကတော့ အမြဲ စောင့်ကြိုနေပါတယ်..
ရိုးသားကြည့်ပါ .. သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး ဖြည်းဖြည်း ချင်းစီနဲ့ နဲနဲ ချင်းစီ ရိုးသားကြည့်..အကျင့်ရလာတဲ့ အခါ သိပ်မခက်တော့ဘူးဆိုတာ သိလာမှာပါ...
ငိုလိုက် .ငိုချင်ရင် ငိုသာ ငိုလိုက် ..အံကြိတ်ပြီး ခံစားနေတာက ပိုပြီး နာကျင်စေတယ်..
ပြီးတော့ သူတို့တွေကို ပြုံးပြလိုက်ပါ.. စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ပြုံးကြည့်ပါ...အဲ့ဒါ ဟန်ဆောင်တာ ဆိုပေမယ့် ပြုံးပြပါ များတဲ့အခါ အပြုံးဆိုတာ တမင် ဟန်ဆောင် စရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားမိလာလိမ့်မယ်...
ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲ ရတာ ဘယ်လောက် ခက်လဲ ဆိုတာ ကိုယ်ပဲ သိတယ်.. ဒါပေမယ့် အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့... အမြဲတမ်း တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းက တစ်ချို့အရာ တွေကို တမင်တကာ မဟုတ်ပဲ မေ့ပျောက်စေတယ်....
အနှုတ်တွေများနေတယ် ဘဏ်ကဒ်ကို ကြည့်ပြီး အထိတ်တလန့် ဖြစ်မိပေမယ့် .. ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေရာလေးမို့ ဘယ်သူရဲ့ လောင်းရိပ်မှ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အသိက အသက်ရှူရတာ ပိုဝစေတယ်..
လိုချင်တာတွေကို အောက်ဆုံးအထိ ချပစ်လိုက်တယ်..
တွေးထားတာက ငါ မနက်ဖြန်လဲ သေဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့..
ကိုယ့်လက်ကို ဆွဲထားနိုင်တဲ့ အရာတွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားလိုက်တယ်...
ပြောင်းလဲ နေဆဲ ပါ...
ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမလဲ ဆိုတာ မသိနိုင်ပေမယ့်..
ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ အရာတွေကို တစချင်းစီ လွတ်ချပြီး ပြောင်းလဲ နေရတာ နာကျင်ခံရခက်ပေမယ့်...
အတ္တဆိုတာ နဲလာရင် လူ့ဘဝဆိုတာ နေသာလာပါတယ်...
>>> အိမ်မက်ဘလော့ဒ်လေးကို ပစ်ထားခဲ့လိုက်တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်.. အိမ်ပြောင်းခြင်းမှ အစ တခြားအရာတွေကို ပြောင်းလဲရင်းနဲ့ တိတ်တိတ်လေး ပုန်းနေလိုက်ခဲ့တာ
နဲနဲ လေး နေသာလာမှ စာပြန်ရေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ
ဒီကြားတယ် လာလည်ခဲ့တဲ့ မောင်နှမတွေကို သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အိမ်မက်လာမလည်နိုင်ခဲ့တာကို လဲ တောင်းပန်ရင်း ...
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 11:36 AM5comments: